Signature de l’accord de 10éme don hors-projet
TSENABEN’NY SAKAFO SY NY LAKOZIA
Le cérémonial militaire de passation de commandement entre le Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire
«< 346 347 348 349 350
Lasa variana amin’ ny sakafo avy any ivelany ny ankamaroan’ ny Malagasy. Manoloana izany, mitady ny fomba hamerenana ny hasiny sy hankafizan’ ny eto an-toerana indray ny mpikarakara ny hetsika HAIFY. Hetsika miompana amin’ ny kolontsaina ara-tsakafo ity farany. Ny 26 sy 27 ho avy izao ny andiany faha roa ary eny amin’ ny kianjan’(…)
SG MINISTERAN’NY SERASERA: Tsy ara-dalana ny radio Jupiter matoa nakatona.
Nanazava ny mahakasika ny fanakatonana ny “radio Jupiter” ny Sekretera jeneralin’ny (SG) Ministeran’ny Serasera. Efa nanarina ihany fa mbola tsy nety niova ny namana mpanao gazety Fernand Cello. Betsaka ny fanakorontanana nataony tany amin’ny faritra Ilakaka.